Faah Faahin:Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Jiidda Dagaalka Nugaal, Maxaad Ka Taqaan Deegaanka Suuj Qalcadihii Daraawiishta.
Wednesday March 16, 2016 - 20:54:00 in Wararka by Super Admin
Xaalad deganaan ah oo aan caga badan ku taagnayn ayaa laga dareemayaa deegaano iyo degmooyin katirsan gobollada Nugaal iyo Bari ee dalka soomaaliya halkaasi oo dagaallo culus ka socdeen maanta oo idil.
Sawir hore muuqaalka degmada Garacad
Dagaallada oo u dhaxeeya maleeshiyaad taabacsan maamulka Puntland iyo xoogag katirsan xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa maanta ka dhacay deegaanada Garmaal iyo Suuj oo ka wada tirsan gobolka Nugaal.
Wararka ka imaanaya jiidda hore ee dagaalka ayaa sheegaya in deegaanka Suuj uu maanta martigeliyay dagaalkii ugu cuslaa abid boqol sanadood kadib.
Ciidamada maamulka Puntland ayaa lagusoo waramayaa in khasaara lixaad leh uu kasoo gaaray dagaalka halka dhinac xoogaga Al Shabaab aan la ogeyn khasaaraha gaaray.
Magaalada Garoowe ayaa la geeyay dhaawacyo iyo meydad farabadan, ilo wareed diiday in magaciisa la adeegsado oo Garowe ku sugan ayaa SomaliMeMo u sheegay in isbitaalka guud ee magaaladaasi la dhigay dhaawacyada illaa 40 askari oo dhammaantood kusoo dhaawacmay dagaalkii maanta sidoo kale Dhimashada ayaa ka badan 15 askari sida wararku sheegayaan balse maamul goboleedka Puntland waa beeniyay in khasaara kasoo gaaray dagaalkii maanta.
Wararka qaar ayaa sheegaya in gaadiid Tikinika ah laga gubay maamulka Puntland balse wali wax war ah saxaafadda masiin saraakiisha xarakada Shabaabul Mujaahidiin.
Taariikhda Deegaanka Suuj.
Deegaan Suuj ee gobolka Nugaal ayaa taariikh fog u leh dagaallada waqti hadda laga joogo ku dhawaad 90 sanadood waxaa halkaasi dagaallo ku dhaxmareen ciidamadii Darawaashiita ee uu hoggaaminayay Sayid Max’med Cabdulle Xasan iyo ciidamadii Talyaaniga oo ay la socdeen maleeshiyaad dabadhilifyo Soomaali ah.
Suuj ayaa leh qalcado istiraatiiji ah oo Daraawiishtii Sayidka ay dhiseen waana dhul ay adagtahay sida looga saaro ciddii la wareegta.
Garmaal iyo Suuj waxay noqdeen meeshii ugu horraysay oo ay isku fara saaraan ciidamada Mujaahidiinta ee gulufka ku qaaday deegaanada Puntland iyo maamulka Cabdi Wali Gaas lamana oga sida ay wax noqon doonaan.
Dhanka Garacad Maxaa Kasoo Kordhay?.
Magaalada Garacad wali dib ugumasoo laaban gacanta maamulka Cabdi Wali Gaas mujaahidiinta ayaana awood buuxda ku lehbalse ciidamadaasi gudaha degmada saldhigyo kuma lahan oo waxay degganyihiin duleedka degmada halka ciidamada Puntland aysan u dhawayn magaalada.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in dagaalyahanada Mujaahidiinta ay kulamo kala duwan dadka deegaanka kula qaateen tuulada Kulub, haba yaraatee wax dhiillo dagaal ah lagamasoo sheegin Garacad.
Reer Garacad ayaa indhahooda ku arkay waxay ay yihiin Al Shabaab, Haddii maamulka Puntland ugu sheekayn jiray Al Shabaab waa dad qalato Middi qaroofay sita shacabka dacaayaddaasi meesha way ka baxday oo is faham buuxa ayaa labada dhinac dhax-maray iyadoona haba yaraatee aysan wax isku dhacyo ay dhaxmarin.
Eyl iyo Bandar-beylle Maxaa ka cusub?.
Hubanti la’aan ayaa ka taagan xaaladda degmada Bandar-beylla ee gobolka Bari oo kamid ah degmooyinka ay saameynta ku yeesheen guluf dagaaleedka Jihaadiyiinta.
Xalay fiidkii ayaa isgaarsiinta hawada laga saaray,warar soo baxay ayaa sheegayay in Bandar-beylla ay ugacan gashay ciidamada shabaabul Mujaahidiin kuwaasi oo dhanka badda doonya uga yimid balse majirto cid si rasmi ah u sheegi karta xaaladda dhabta ah ee Bandar-beylla ay ku sugantahay.
Dhinaca degmada Eyl waxaa wali gacanta ku haya ciidamada maamulka Puntland laakin waxaa ka taagan xiisad dagaal oo waxaa laga cabsi qabaa in awoodda jihaadiga ah ay halkaas ugur guurato.
Si walba oo ay ahaato saacad walba ayaa isbedello laga filan karaa degmooyinka iyo deegaanada Puntland oo sida muuqata kusoo biiraya loolanka Jihaadiga ah ee ka socda Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya.
Waxaa xusid mudan in wali wax war ah uusan kasoo bixin Al Shabaab oo ku saabsan dagaalka Nugaal.
Warbixinta Waxaa Diyaariyay Saabir Cadde
Tifaftirka Wariye Liibaan Jeexoow Cabdi